Sunday, 24 December 2017 07:49
Finfinnee, Mudde 15, 2010 Kutaawwan magaalaa ja'an dheheenya kana moggaafaman jalatti gandoonni 14 duraan lakkoofsaan 1-14 jedhamanii turan maqaa Oromoon duriyyuu ittiin waamuun akka mogga'an har'a ragga'eera.
Addababayiiwwanii fi daandiiwwan gara garaas Gootota, Atileetotaa fi Artiistii bebbeekamoo qabsoo Oromoo keessatti ga'ee ba'ataniin moggaafamaniiru.
Daandiin guddichi Galma Abbaa Gadaatii ka'ee gara Harargee geessu Daandii Abbaa Gadaa, Addababayiin seensa Adaamarra jiru Jeneraal Taaddasaa Birruutiin, Daandii duraan Wanjii Maazooriyaa jedhamu Atileet Waamii Birraatuutiin, Daandiin Haaraan amma ijaarame gama kaaba magaalatiin Harargeerraa Finfinnee geessu Artiisti Alii Birraatiin akka waamamu ta'eera.
Daanduma kanarratti Addababayiin gurguddaan lamman Jeneraal Waaqoo Guutuu fi Koloneel Abdiisaa Aagaatiin akka waamamu murtaa'era.
Daandiin Asallaatiin Magaala Adaamaatti galummoo dhibbaalaa Maammoo Mazammiriin yoo moggaafamu daandii buufata konkolaataa jalaan gara kaaba magaalaa geessu kana booda Elemoo Qilxuun waamama.
Daandiin haarawni dhidhiphina tiraafikaa hir'isa jedhame Maqaa Pirezidantii Naannoo Oromiyaa duraanii Obbo Alamaayyoo Atoomsaan mogga'e.
Kana malees Adaamaan daandii Karrayyuu fi Siinqee jedhu moggaafachuun dhaloota har'aa duudhaa Oromoo itti barsiisufi.
Kantiibaan bulchiinsa Magaalattii Aadde Adaanach Abeebee magaalattii akka sabboonummaan dimokraasii keessatti dagaagu gochuuf hojjanna jedhaniiru.
Sirnuma moggaasaa kanarratti eebbi piroojaktoota daandii, gamoowwanii fi mana barumsaas raawwatameera.
Sadarkaa Itti-aanaa Pirezidantiitti Hogganaan Biiroo Misooma Magaalaa fi Manneenii Obbo Abdullaaziis Mahaammad magaalonni giddu-gala industirii akka ta'an gochuun gamatti hojii dhabaan carraa hojii argatee keessaatti hojjachuu akka danda'u goona jedhani.
Piroojaktoonni kunneen daandii kiilomeetira 3.17 dabalatee gamoo seektara lafaa bulchiinsa magaalaa, gamoo bulchiinsa magaalaa Booletti ganda Gooroo waliigala Birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona 68 oliin ijaaramani.
Baasii kana keessaa miiliyoonni 40 bajata mootummaa naannoo irraa kan argamedha.
Bulchiinsi Magaala Adaamaa bara kana carraa hojii kuma 15 uumuuf karoorfatee hamma yoonaatti kuma 8 fi 88 raawwachuu Kantiibattiin Aadde Adaanach himaniiru.
Sirna har'aa kanarratti lafti heektaarri 88 hojjattoota mootummaa fi jiraattota magaalaatiif mana jireenyaaf akkasumas dargaggoota carraan hojii uumameef iddoo hojii fi daldalaaf ta'u laatameeraafi. Kana malees, jiraattota harka qalleeyyii ta'niif mana gandaa kana dura namni qabeenya qabu keessa jiraataa ture 38 kennameeraafi .Manneen akka kanaa 70 ta'an kana dura kennamuunsaanii ni yaadatama. Getaachaw Mul'ataatu gabaase.(FBC)
More in this category: « Biyyattiitti wiirtuuwwan wal’aansa kaansarii qofa kennan shan banamuuf jedhu Lammiikoof nan fiigan dabarfame »
TV OROMIYA NOV-14-2016 Views : 3847
Torbe Kana 29682
Ji'a Kana 49430
01/05/07 irraa eggalee 8010483